UNksz Camilla Wolfson obelingisa ngonodoli.
Abafundi abaqhuba izifundo zeHonours kwiDrama and Performance Studies e-UKZN benze umdlalo weshashalazi ovutha ubhedu mayelena nokuhlukumezana kwabafundi ezikoleni. Lomdlalo oqanjwe ngokuthi yiSplinters udlale kusukela kumhlaka 27 kuya ku-30 enyangeni kaNtulikazi ezikhungweni iHoward College kanye naseMgungundlovu kanti usuphuma nakwiNational Arts Festival yamnyakayonke eGrahamstown.
Abasunguli beSplinters uNksz Donna Steel kanye noNksz Amy Wilson bajulile ngokulwa nokuhlukumezana kwabafundi ezikoleni zamabanga aphansi. Kulingise abafundi abayisikhombisa kwiSplinters kanti bonke bangabafundi base-UKZN.
ISplinters ikhuluma ngendaba kaJade, odlalwa nguNksz Phumelele Majola, ongomunye wabafundi abahlukunyezwa ngabanye abafundi esikoleni sakhe. Ukuhlukumezana kwabafundi kusikhumbuza ukuthi yilapho kuqala khona ukucwasana entsheni ngokwebala, ngokobulili, ngobuzwe kanye nezinye izindlela. Umdlalo lo uveze ithuba elisemqoka lokusungula izindlela zokulwa nalesi simo esibhekana nabafundi abasebancane.
UNksz Camilla Wolfson obelingisa ngonodoli kanye noMnu Brandon Moulder odlale indawo kamfana wesikole balingise ngokuvelele. Iyancomeka indlela ababhali beSplinters abahlanganise ngayo lomdlalo.
‘Akumelanga ukuhlukumezana kwabafundi kuthathwe njengento woke umfundi okumele abhekane nayo nje,’ kusho ababhali. ‘Entsheni eningi kuzwelonke lesi simo senza abafundi bathuthumele uma beyiswa esikoleni, kuyabahlukumeza, kokunye kubaqhube baze bacabange ukuzibulala kuze baphumule kulokhu,’ kusho ababhali.